उपत्यकावासीलाई उमेरमै अनेक रोग | Nagarik News - Nepal Republic Media
उपत्यकावासीलाई उमेरमै अनेक रोग
२६ पुस २०७६ १६ मिनेट पाठ
पछिल्लो समय काठमाडौ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका मुख्य सहरहरुमा प्रदुषण बढ्दो छ। जाडो मौसममा काठमाडौं उपत्यकामा प्रदुषणको तह बढिरहेको प्रदुषण मापन यन्त्रले औल्याएका छन्।
प्रदुषणले उपत्यकावासी तथा मुख्य सहरवासीको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परिसकेको अस्पतालमा केही अध्ययन तथा अनुभवी चिकित्सकहरुले जनाएका छन्। चिकित्सकका अनुसार प्रदुषणले मुटु,मस्तिष्क,फोक्सो,आँखा र छाला मुख्य असर पर्ने अगं हुन्। यस्तो असर नेपालमा पनि परिरहेको छ। केही रोगको बारेमा अध्ययन भएको छ धेरैको खास अध्ययन हुन सकेको छैन।
अध्ययनहरुले बढी प्रदुषित क्षेत्रमा बिहानै तथा चिसो मौसममा पुगेर व्यायम नगर्न समेत सुझाएका छन् । तर प्रदुषणको असरले हुने केही नयाँ रोगहरु बढिरहेको चिकित्सकहरु औल्याउँछन्। जुन यस प्रकारका छन्।
फोक्सोमा दम र क्यान्सर
चिकित्सकका अनुसार प्रदुषणले फोक्सोमा दुई चरणमा असर गर्छ। पहिलो तत्कालै दोस्रो दीर्घकालिन असर। प्रदुषणबाट उत्पन्न धुवाँ सिधै श्वास–प्रश्वास हुँदै फोक्सोमा पुग्ने कारण श्वास–प्रश्वास नलीमा संक्रमण,कीटाणुजन्य संक्रमण, व्रोङकाइटिश, निमोनियाँ लगयायतका रोगहरु लाग्छन्। धेरै धुलो धुवाँमा काम गर्नेहरुमा व्रोङकाइटिश रोग लाग्छन्। व्रोङकाइटिश भयो भने ठूलो श्वास नलीमा संक्रमण हुन्छ। यो कम उमेरका बालबालिका र बृद्ध–बृद्धामा हुन्छ। व्रोङकाइटिश भएमा छातिमा खकार देखिने,श्वास–प्रश्वास प्रणालीमा समस्या आउने,छातिमा घ्यार–घ्यार हुने जस्ता समस्या देखिन्छन्। जाडो मौसममा प्रदुषण बढी हुने भएकोले यी रोगको जोखिम पनि जाडो मौसममा नै बढी हुने चिकित्सक बताउँछन्।
नेपालमा दम रोगको संख्या बढिरहेको अस्पतालमा आउने विरामीको स्थिति र अध्ययनले समेत पुष्टि भइसकेको वीर अस्पतालका श्वास/प्रश्वास रोग बिशेषज्ञ डा.अशेष ढुगांना बताउँछन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषणले हालै गरेको अनुसन्धान अनुसार कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतमा दम रोग पाइएको छ। सवै भन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १५.१ प्रतिशतमा दम रोग छ। प्रदेश २ मा १६.२ प्रतिशतमा दम रोग,सुुदुरपश्चिममा १४.३ र प्रदेश ३ मा ११.७ प्रतिशतमा दम रोगी पाइएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दो प्रदुषण,सहरीकरणको कारण सवारीसाधनवाट निस्कने धुवाँ,सहरीकरणबाट निस्कने धुलो–धुवाँ जस्ता कारणले दम रोगमा बृद्धि भएको चिकित्सकले दावी गरेका छन्। ‘पहिला चुरोटको प्रयोग र दाउराको इन्धनवाट निस्कने धुवाँले दम हुन्थ्यो,अहिले प्रदुािष्त वातवरणले भइरहेको देखिन्छ’वीर अस्पतालका डा.ढुंगानाले भने। उनको अनुसार पछिल्लो समय कहिल्यै चुरोट प्रयोग नगरेकाहरुमा फोक्सोको क्यान्सर समेत देखिन थालेको छ।
कर्णाली जिल्लामा घरभित्र प्रयोग गरिने इन्धनवाट निस्कने धुवाँले फोक्सोमा असर गरी दम रोग बढेको र मुख्य सहरहरुमा गाडीको इन्धन,निर्माण क्षेत्र तथा कलकारखानाबाट निस्कने धुवाँको कारण दम रोग बढेको डा.ढुगाँना बताउँछन्। ‘कहिल्यै धुमपान नगरेकाहरुमा पनि फोक्सोको क्यान्सर भएको देखिन्छ,यस्तो हुनु भनेको प्रदुषणको असर भनेर बुझ्नु पर्छ,तर हामी कहाँ अध्ययन भएको छैन’डा.ढुंगानाले भने।
कम उमेरमै पार्किन्सन र न्युरोप्याथी
चिकित्सकका अनुसार कम उपत्यकामा बढ्दो प्रदुषण्को असर मस्तिष्क तथा मस्तिष्कजन्य रोग समेत नयाँ रुपमा देखा परेका छन्। पहिला उमेर पुगेपछि मात्र देखिने पार्किन्सन र न्यरोप्याथी र मस्तिष्कघात समेत देखिन थालेको छ। चिकित्सकका अनुसार प्रदुषणवाट उत्पन्न हुने सानो धुलोको कण तथा धुवाँ श्वास–प्रश्वास सिधै फोक्सो र फोक्सो हुँदै मुटु र मस्तिष्कमा समेत पुग्ने भएकोले यी अंगमा समेत प्रदुषणले असर गर्छ।
वीर अस्पताल न्युरोलोजी बिभागका अनुसार पछिल्लो समय बृद्ध उमेरमा हुनु कतिपय मस्तिष्क सम्वन्धी रोगहरु कम उमेरमै देखिएको छ। मस्तिष्कमा डोपामिन नामक रसायन हुन्छ। यो रसायनले न्युरोन उत्पादन गर्छ। यसको कमी भयो भने पाकिन्सन नामक रोग लाग्छ। नेपालमा यस्तो रोग एक दशकदेखि यता कम उमेर समुहमा समेत देखिंदै गएको वीर अस्पताल न्युरोलोजी विभागका प्रमुख डा.सुनिल कोइराला बताउँछन्। उनको अनुसार यो रोग ६० वर्षपछि मात्र लाग्नु पर्नेमा नेपालमा ३०÷३५ वर्षमै देखिंदै गएको छ। बिभागमा मासिक आउने ४० जना पार्किन्सनका बिरामी मध्ये पाँचदेखि सात जना कम उमेर समुहका छन्। डा.कोइरालाका अनुसार कम उमेरमा पार्किन्सन भएर आउनेमा सहरवासी र ग्रामिण किसान दुवै छन्।
यो स्थिति हेर्दाै बिषादी प्रयोग गर्ने किसान र सहरको प्रदुषण्को सम्पर्कमा रहेका सहरवासी दुवै कारणले पार्किन्सन बढेको हुन सक्छ। ‘अध्ययन भएको छैन,बिरामी हेर्दा बुढो उमेरमा लागेको रोग जवानीमै लागेको देखिन्छ’उनले भने। चिकित्सकका अनुसार पार्किन्सन भएमा शरिर अर्रर हुने,वोली मसिनो हुने जस्ता लक्षण देखिन्छ।
डा.कोइरालाका अनुसार प्रदुषणकै कारण देखिने अर्को रोग हो न्युरोप्याथी। प्रदुषणबाट निस्कने धुवाँ र धुलो धुवाँले न्युरो(नशा)मा पुग्छन् र नशाहरु सुक्दै जान्छन्। यसको कारण हात–खुट्टाका मांशपेशी सुृक्दै जान्छन्। अस्पतालमा न्युरोप्थाथी भएका मासिक १०/१२ जना यस्ता बिरामी आउँछन्। यसको कारण बिरामीलाई हिंडडुल गर्न गाह्राे हुने र जीवन नै एक प्रकारको अपांगता हुने हुन्छ।
डा.कोइरालाका अनुसार प्रदुषणको कारण मस्तिष्कघात पनि बढेको छ। तर नेपालमा यसको बिषयमा अध्ययन हुन सकेको छैन। उनको अनुसार प्रदुषणबाट उत्पन्न हुने धुवाँले धुमपानले जस्तो रगतको नलीको भित्री लेयर नष्ट गरिदिन्छ। रगतमा धुलोको कण जम्मा भएमा रगतका नलीहरु साँघुरो हुन्छन् र उच्च रक्तचाप बढाउँछ। जसले कुनै पनि समय मस्तिष्कघात हुने सम्भावना हुन्छ।
मुटु तथा रगतको नलीजन्य रोग
प्रदुषणबाट निस्कने नाइट्रोअक्साइड तथा नाइट्रोअक्साइड स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छन्। प्रदुषणबाट निस्कने ०.५ पिएम फोक्सो हुँदै रगतको नलीमा छिर्छ। यसमा हुने कार्वन मनोअक्यासइड खराव तत्वमा पर्छ। यस्तो धुलो रगतका धमनीमा जम्मा भई धमनी साँघुरो पार्छ। जसको मुटुमा वोसो जमेको हुन्छ, त्यहाँ धुलो जम्मा भएमा भइ रक्तसंचार बन्द हुन सक्छ। धुलोले मुटुको नशामा बनाउने संक्रमणले मुटुको नशामा रगतको कमी हुन सक्छ। रगत वाक्लो भएर रक्त संचार बन्द हुने अर्को जोखिम हुन्छ। धमनीमा साँघुरोपनाले हृदयघातकै जोखिम हुन्छ। क्रमिक रुपमा हुने घाउले धमनी साँघुरो भइ मस्तिष्कघात र हृदयघात हुने सम्भावना हुन्छ।
प्रदुषणले हुने यी असरको बारेमा नेपालमा खास अध्ययन भएको छैन। केही वर्ष अघि अमेरिकामा गरिएको राष्ट्रिय मृत्युदर र प्रदुषणको असरवारे अनुसन्धानले फोक्सो र मुटुको कारणले हुने मृत्यु बढेको औल्याएको छ। चिकित्सकका अनुसार वायुमण्डलको तल्लो तहमा भएको प्रदुषणले मुटुलाई असर गर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा कायम बढ्दो प्रदुषणले यी रोग लागिसकेको हुने आंकलन गर्न सकिन्छ। अस्पतालमा स्थानगत बिरामीको तथ्याकं नराखेको कारण उपत्यकावासीमा प्रदुषणको मुटुस्वास्थ्यमा परेको असरको बारेमा तथ्याकं नभएको राष्ट्रिय गंगालाल हृदयकेन्द्रका मुटुरोग बिशेषज्ञ डा. सुजिव राज भण्डारीले बताए। तर पछिल्लो समय अस्पतालमा बढ्दो हृदयघात तथा मस्तिष्कघात,उच्चरक्तचाप जस्ता रोगको स्थिति हेर्ने हो भने प्रदुषणको कारण पनि यी रोग बढेको स्थिति छ।
अस्पतालमा बिरामीको स्थिति हेर्ने हो भने पहिलो मुटु सम्वन्धी रोग ४२ प्रतिशत,१३ प्रतिशत उच्चरक्तचाप,१३ प्रतिशत बाथमुटुरोग र वाँकीमा दम रोग भएका बिरामी उपचारका लागि पुगेको त तथ्याकं छ। यो वर्ष अस्पतालमा १४ हजार ६ सय जना बहिरंग बिभागवाट र १६ सय ८९ आकस्मिक कक्षवाट सेवा लिएका थिए। राजधानीमा कायम प्रदुषणबाट मुटु स्वास्थ्य उचित राख्न बढी प्रदुषित भनिएका स्थानमा पुगेर व्यायम नगर्ने,माक्स लगाएर मात्र हिंड्न डा.राजभण्डारीको सुझाव छ।
आँखामामा एलर्जीले हैरान
चिकित्सकका अनुसार वायु प्रदुषणले आँखामा सुख्खापनको समस्या,आँखामा एलर्जी हुने जस्ता समस्या हुन्छ। तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका अनुसार दश वर्ष अघिसम्म बसन्त क्रतुमा मात्र आँखा चिलाउने समस्या हुन्थ्यो। पाँच/सात वर्षदेखि यता बाह्रै महिना आँखा चिलाउने समस्या देखिएको छ। चिलाउने समस्या १०/१२ दिनपछि आफै हराएर जान्थ्यो।‘अहिले उपत्यकामा बाह्रै महिना आँखा चिलायो भन्दै आउँछन्’तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानकी नेत्ररोग बिशेषज्ञ डा. सिर्जना अधिकारीले भनिन्। उनको अनुसार अस्पतालमा आउने कुल विरामीको ७० प्रतिशत प्रदुषणसित सम्वन्धित छन्।उनीहरु पटक–पटक आँखा चिलाउने र सुख्खा हुने समस्याले उपचारमा अस्पताल पुग्ने गर्छन्। अस्पतालमा दैनिक १ हजारदेखि १२ सय जना बहिरंग बिभागमा उपचारका लागि पुग्छन्।
आँखा चिलाउने समस्या भएकाहरुले आफुखुशी औषधी किनेर हाल्ने चलनले पनि आँखामा थप रोग थपिएको छ। सिधै औषधी पसलवाट औषधी लिंदा कतिपय कमसल र गलत औषधी पर्ने गर्दा आँखामा जटिल समस्याहरु देखिएका छन्। आँखामा गलत उपचार भएमा मोतीविन्दु,जलविन्दु भइ अन्धोपना समेत आउने हुनाले जथाभावी औषधी नखान चिकित्सकको सुझाव छ।
छालामा एलर्जी र डावर बढे
प्रदुषणले छालामा लाग्ने रोगहरु समेत बढिहरहेको अस्पतालले जनाएका छन्। वीर अस्पताल चर्म तथा छाला रोग बिभागका अनुसार छालामा एलर्जी हुने,चिलाउने,डावर आउने,छालामा डण्डीफोर आउने,चायाँ–पोतो निस्कने जस्ता रोगको दर बढिरहेको छ। चिकित्सकका अनुसार दुई प्रकारका एलर्जी देखिन्छ। हावावाट सिधै छालामा आउने एलर्जी र प्रदुषित हावावाट छालामा आउने एलर्जी हुन्। यी दुवै एलर्जीका बिरामी अस्पतालमा उल्लेख्य संख्यामा पुगेका छन्।
अस्पतालमा आउने बिरामी मध्ये २ प्रतिशत प्रदुषणको एलर्जीको मात्र रहेको वीर अस्पताल चर्म तथा यौन रोग बिभागकी छाला रोग बिशेषज्ञ डा.लैला लामा बताउँछिन्। लामा अनुसार यसरी आउनेमा सवै जसो काठमाडौ उपत्यका भित्रका छन्। चिकित्सकका अनुसार प्रदुषणले छालाको गुणस्तर कमजोर पार्ने,छालाको प्वाल बन्द गरी पसिना निस्कने वाटोमा अवरोध गरिदिन्छ। अवरोध भएपछि छालामा डण्डीफोर आउने,छालामा डावर आउने लगायतका रोगहरु लाग्छन्। प्रदुषण नियन्त्रण नभएमा यी रोगहरु बल्झिरहने हुन्छ। एलर्जी बल्झिरहेको बिरामीले संधै औषधी उपचार गरिरहनु पर्ने हुँदा संधै पीडित भएको अनुभव गर्न पुग्छन्। एलर्जी भित्री भागमा पुगेमा श्वास फेर्न समेत कठिन हुने डा.लामाले बताइन्।
प्रकाशित: २६ पुस २०७६ ०८:२६ शनिबार
उपत्यकावासी बढ्दो_प्रदुषण रोग